DadaRabe " Tsy amidy ny fanahy" | Hevitra mandalo sabotsy 28/07/07 : PLANNING FAMILIAL
« ILAOZAKO NY ATY
VERY TANY ANKOATRA TANY ! »
Hevitra mandalo sabotsy 28/07/07 : PLANNING FAMILIAL
Nampidirin'i dadarabe | 28 Jol, 2007
Matetika ny famerana ny isan-jaza no dradraina ao Madagasikara. Firenena matanjaka moa no mamporisika hanao ireny. Ny ministera aza moa dia ministeran'ny planning familial sy ny fahasalamana.
Mahagaga anefa, 17 tapitrisa ihany ny isan'ny malagasy ary midadasika i Madagasikara. Ny firenena matanjaka sy manonga haingana ny harin-karena faobe dia ireo firenena maro olona.
Any Asia: Japana, Chine, Inde
Eoropa: Allemagne, Frantsa, Angleterre.
Raha betsaka ny mponina dia betsaka ny mpanjifa. Manintona ny mpanam-bola satria misy lalam-barotra anatiny ary tsy voatery ny varotra aondrana ihany.
Raha tsy mitombo ny mponina malagasy dia inona no hitranga ?
"Na ho ela na ho haingana dia tsy ny malagasy intsony no ho maro an'isa eto".
Ahoana ny hevitrao ? Eritrereto hoe !
Mazotoa é !
St Pierre, sabotsy faha 28 jolay 2007
This entry was posted on 28 Jolay, 2007 22:41 and filed under Izao fiainantsika izao .
13 Hevitra & 0 Verindrohy (trackback) amin\_'ny "Hevitra mandalo sabotsy 28/07/07 : PLANNING FAMILIAL"
ka ny blèm ange ny fari-piainana tsy haharaka ny isan'ny zaza e, fa raha akarina aloha ny fari-piainan'ny isan-tokantrano, ny gasy ange tsy konjokonjo ny hanana mihoatra ny 3 sy 4 e. Izaho aza tena midera ny any an-tanindrazana manao mihoatra ny roa, fa ny ahy eto iray dia tsy sahy intsony fa tsy vitan'ny ronono sy ny couche fotsiny ny zaza, fa ny fianarana sy ny fitaizana no tena zava-dehibe, kanefa raha ny ray aman-dreny tsy maintsy mitotototo mitady ny hohanina, tsy ho araka loatra ny fitaizana, ara-tsaina indrindra indrindra.
Ka miankina amin'ny enti-miady amin'ny fiainana izy io amiko. Harena ny zanaka, fa ny famelomana azy koa tsy maintsy heverina.
Nampidirin'i ikalamako 29 Jol 2007, 00:15
Marina ny an'Ikalamako. Midera an'ireo RAD manan-janaka maro koa aho. Tena ezaka be tokoa izany.
Misy firenena be dia be, rehefa lasa minorité ry zareo eo amin'ny taniny dia lasan'olona ny taniny.
Afaka mangataka fahaleovan-tena ireo najary lasa majorité.
3 sy 4 ihany hoy Raimb'l. HItako hoe mety.
Misaotra an'Ikalamako nanome hevitra.
Nampidirin'i DadaRabe 29 Jol 2007, 13:15
Hoy aho hoe, aleoferana Dadarabea ! Ary ilaina mihitsy ny PlanningFamilial, hialana @ ireto manaonao foana ireto,marary ny Aty iray manontolo mahita sy mandre am haino aman-jery ireo Manala zaza efa ho 8 sy 7 volana am-bohoka, avy eo ariana eny am zaoridira sy rano mandeha, fa ny tena tsy zakan'ny saina misy manaray any @ WC.
Eo indray ireo mivaro-janaka TSOTR'IZAO.
KA hoy aho hoe, Aleo hasina fiheverana ihany....
Nampidirin'i Miah 30 Jol 2007, 12:51
Eny, tena mihaino ny hevitrareoaho io. Firy izany no tokony ho isan-jaza ?
Nampidirin'i DadaRabe 30 Jol 2007, 21:54
ny ahy averiko fa miankina amin'ny fari-piainana, ka raha manana ny ampy tokoa ve moa ka afaka mamelona zaza 6 sy 7, inona ny olana ! Fa raha ho velombelom-poana kosa aloha, aleo eritreretina tsara vao mampitombo isa ; misy koa anefa ny tena tsy mbola vonona kosa ho ray aman-dreny, aleo hampiharina - sa atao hoe ampianarina - ny fomba tsy mampanana anaka, fa manjary tonga amin'ny tenin'i miah etsy ambony. Amiko fotsiny hoe na tokana aza aloha tsy maninona fa aleo vitsy dia vita tsara toa izay marobe zara raha velona. Nampidirin'i ikalamako 30 Jol 2007, 23:35
Ka ny olana anie dadarabe, na ho 60 tapitrisa aza isika ka mahantra be daholo ary tsy velona ny zaza ateraka fa mareforefo be daholo dia ahoana???
Nampidirin'i Mike 31 Jol 2007, 02:28
Aiza kosa no dia ahantra foana é !
Mino aho fa ho tafavoaka isika. DdRb
Nampidirin'i DadaRabe 31 Jol 2007, 11:03
eo @ 2 na 3 eo dia ampy, zany ary mety tsy ho velona aza zany raha zao fahantrana zao
Nampidirin'i RHN 01 Aog 2007, 18:16
Dia ataontsika hoe roa sy telo izany.
Aza misalasala anefa manampy raha manana an ! :-)
Nampidirin'i DadaRabe 01 Aog 2007, 19:02
ary ny an i dadarabe aloha firy e
Nampidirin'i hery 02 Aog 2007, 03:02
Efa roa. Lalina indray ilay fanontaniana ry Hery.
Fa azo atao dimy.
Nampidirin'i DadaRabe 02 Aog 2007, 11:48
"Izao tontolo izao ho an'ny malagasy". Tamin'ny taona 2000-2001 tany ho any ry Hery dia io no soniako tao amin'ny serasera.
Variana aho fa izay tany rehetra alohako dia misy malagasy avokoa.
Nampidirin'i dadarabe 03 Aog 2007, 22:53
Hamaranako ity resaka ity : Misy antony no nanoratako an'io lahatsoratra io.
Tsakotsakoy dia avadibadiho.
Nampidirin'i DadaRabe 06 Aog 2007, 16:20